हामी थाकेका छैनौं !
बिहिबार, असोज ७, २०७८ ०३:१४:२६ युनिकोड
मंगलबार, साउन २६, २०७८ Dhading Sanchar
पछिल्लो ३ महिनामा ८२ दिन हामी संयुक्त अनुगमन टोली धादिङका धेरैजसो बजारमा अनुगमनका लागि निस्कियौं । नेतृत्वमात्र मेरो हो। काम गर्ने र हौस्याउने अरु धेरै जना छन् । किराना पसलबाट सुरु भएको अनुगमन क्रमशः औषधि पसल, डेरी, बेकरी उद्योग, मासु पसल हुँदै अहिले होटलसम्म आइपुग्दा ७०१ ओटा फर्म अनुगमन गरिसकेछौं ।
जरिवानामात्रै १०० ओटालाई भएछ । त्यसबाट राज्यलाई प्राप्त राजस्वः १० लाख ६० हजार । १६ लाख बराबरका म्याद गुज्रिएका सामग्री जफत गरिएछ । उपभोक्ता सचेतना बढेको महसुस भएको छ । आएको गुनासो ढिलो चाँडो सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छौं । सोही सन्दर्भमा आजको १०० औं कारबाही विशेष रहेकोले सेयर गर्न चाहेँ ।
२०७७/१२/२६ गते हेलो सरकारमा एउटा गुनासो टिपाइयोः हाइवेको पल्पसा क्याफे नामक होटलले उपभोक्तामैत्री व्यवहार गरेन र बढी मूल्य लियो भन्ने । माग थियो तुरुन्त अनुगमन गरेर कारबाही गर्नुप¥यो भन्ने । हेलो सरकारमार्फत उक्त गुनासो सोही दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङलाई आवश्यक कारबाहीको लागि पठाइयो ।
प्रशासन कार्यालयमा नयाँ सहायक सिडिओको रुपमा मलाई भर्खर मात्रै वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागबाट निरीक्षण अधिकृतको जिम्मेवारी प्राप्त भएको थियो। तर कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएका कारण निरीक्षण, अनुगमन सुरु गर्न सकिएको थिएन । पछि निषेध आदेश जारी भएपछि होटल तथा खाजाघरहरु सबै बन्द गरिए । बाँकी बजार अनुगमन भने सुरु भयो ।
केही दिनअघि होटलहरु खुल्न थालेसँगै हाइवेका विभिन्न ठाउँमा होटल अनुगमन गर्न पनि सुरु भयो । यही क्रममा आज मिति २०७८/०४/२५ गते चार महिना अघिको लिखित उजुरी अनुसार स्थलगत अनुगमन गर्न धुनिबेशी–६, नौबिसेमा रहेको “न्यू पल्पसा क्याफे साइड”मा पुग्दा यस्तो पाइयोः–
.....क्याफेले अखाद्य (कुहिएको) आलु प्रयोग गरेको थियो । मूल्यसूची राखेकै थिएन । बिक्री बिल प्रयोग गर्दै नगरेको। भान्छा तथा अन्य होटलको सरसफाईमा ध्यानै नदिएको। कोभिड–१९ को जोखिम बढिरहँदा समेत स्वास्थ्य तथा सुरक्षाका मापदण्ड तथा कामदारको सुरक्षाप्रति पूर्ण बेवास्ता।....
क्याफेलाई रू. १० हजार नगद जरिवाना गरियो । संयोग के भने, बजार अनुगमनको यो १०० औं कारबाही हो । कारबाही गरिएको जानकारी उजुरीकर्तालाई मैले फोनबाट गराइसकेँ । धन्यवाद समेत दिएँ एउटा सचेत नागरिकको भूमिका निभाउनु भएकोमा ।
कारबाहीमात्र सबै थोक होईन यद्यपि जरिवानासँगै हामीले होटल सञ्चालकलाई गर्नुपर्ने सुधारको बारेमा मौखिक र लिखित निर्देशन पनि दिएका छौं । सुधार्छौं भन्नुभएको छ । आशा छ, सुधार हुनेछ । अन्तिममा भन्न चाहेः“हामी थाकेका छैनौं, हामीलाई उजुरी गर्नुहोस् । तपाईको गुनासो सुन्नको लागि मेरो मोबाइल नं. ९८५११९६१३१ जतिबेलै खुल्ला छ।” जय उपभोक्ता !
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन २६, २०७८